janvier | 2009 | GAZETY_ADALADALA
Filoha, Tsy filoha
Posted on 31/01/2009 by gazetyavylavitra
Dia tonga maro namaly ny antso teny amin’ny 13 mai indray ireo mpomba an’i Andry Rajoelina androany. Talohan’ny nahatongavako teny dia nisy fiara 4 x 4 nisosososo nisongona ny scooter-ko teny an-dalana, hay ireto izy handeha handrava teny amin’ny 13 mai. Niditra an-keriny teo an-kianja hono ireo ary naka an-keriny fitaovana sy seza teo amin’ny 13 mai. Tsy ny rehetra anefa no lasa ary tsy nahaleo ny herin’ireto mpanohana an’i Andry kao ry zalahy ka lasa nandeha nirifatra nandositra.
Nanomboka teo dia tsy nisy nataoko afa-tsy ny naka sary sisa rehefa tonga teny an-toerana. Teny no nandrenesana ny hafatra avy amin’ny EMONAT (araka ny Radio VIVA) fa nilaza ry zareo hoe tsy avy amin’ny EMONAT ireny olona nanao barofo teny an-kianja ireny.
Nifandimby niteny teo ireo mpianatra, mpiasam-panjakana, solotena isam-paritra, sendika, senatera, sns… Satria tokoa nisy senatera sy olom-boafidy tonga teny ary nanao samboady mihitsy.
Notanisaina teny an-kianja daholo androany ireo teboka efa ho folo lazain’ireo mpomba an’i Andry fa fanitsakitsahana lalampanorenana nataon’Atoa Ravalomanana Marc, ka tafiditra ho isan’ny tena antony azo analana azy amin’ny toerany, ka isan’izany ny resaha ‘haute trahison’ momba ny fanafarana mpikarama an’ady hamono ny taranaka Malagasy, ny fanaovana fanavakavahana ara-pinoana sns….
Teny ampamaranana ny fotoana, rehefa ela no niandrasan’ny vahoaka azy, dia nivoaka ihany ilay fanambarana lehibe nataon’i Andry Rajoelina, ka nanabaràny fa izy ny mitondra vonjimaika ny tetezamita, ary manome baiko sy mitantana ny raharaha rehetra. Nisy ny fanaingany ny tafika sy ireo ministera isan-tokony mba hanaraka ny baikony.
Mifanome fotoana eny indray ny rehetra amin’ny Alatsinainy amio,’ny 10 ora maraina. Nilaza izy fa mandra-pahatongan’ilay governemanta tetezamita, dia angatahana ny Ministera sy ny biraiom-panjakana rehetra tsy hisy hivoha intsony.
Fa teny an-tsefatsefany teny dia mbola misy ihany ny gaigy sahy misangy vahoaka. Nisy tovolahy iray tratra nitondra basy tao anaty vahoaka tao, ka nosamborina. Rehefa natao ny fanadihadiana dia ‘basy kilalao’. Saingy inona no antony nitondrana sy nanehoana izany teny anivon’ny olona marobe teny. (hadalàna ny azy). Voalaza teny ambony lampihazo koa fa nisy fiara nizara vola tao ambadimbadika tao (nolazaina teny hatramin’ny laharan’ny fiara mihitsy), ary tany Ambodifilao tany, taorian’io fizarana vola io dia efa nisy vondron’olona nanomboka nitangorona tsy fantatra hoe hanao inona. Notondroina avy hatrany ho ireo ‘casseurs’ moa ireny. Ary niantsoan’ny teny ambone sehatra ny mpitandro ny filaminana mba hijery izany akaiky.
Raha mijery ny canal misy ny TVM sy ny sary alefan’ny MBS kosa ianao rehefa tonga aty an-trano, dia sary mitovy no mandeha ao. Isaky ny 15 na 30 mn eo dia ny hafatra avy amin’ny mpitondra no mandeha ao, ary fampilazana fa hampiasa hery raha ilaina. (araka ilay commandant vaovaon’ny Gendarmerie: Pili Gilbain). Rehefa nanontaniana ny mpiasa tao amin’ny TVM dia nilaza fa tsy fantany na ny toerana iaingan’ilay sary mivoaka ao amin’ireo fahitalavitra roa lazaiko etsy ambony ireo. Izany hoe piratage no zavatra misy. Saingy tsy fantatra hoe aiza no misy ilay foibe andefasana azy. Ary teknisian’ny MBS no mandefa azy. (s: Johary Ravaojanahary). Dia sanatria ve hiverina indray ny resaka taloha ‘pensée unique’, hoy i Ismael Razafinarivo izay, ao amin’ny Radio Antsiva FM 97.6 ao.
Rehefa vita moa ny fihaonana teny amin’ny 13 mai dia nasaina nirava am-pilaminana ny rehetra, ary dia nilamina tokoa hatramin’ny fotoana nidirako ny varavaran-tranoko.
Fampitam-baovao ho anao no nataoko, koa aza maika ny handoko ahy ho itsy na iroa. Misaotra
Raha te-hijerijery sary moa dia any amin’ny flickr any ry zareo rehetra no nivahiny androany.
Manolotra fisaorana manokana ho an’ireo namatsy fitaovam-piasàna ahy ny tenako. Dia i Boaikely izay nahafahako naka sary hatramin’ny ela, ka hatramin’izao.
Filed under: fiaraha-monina, politika, tantaram-pirenena, tapatapany |	4 Comments »
Ravalomanana vs Rolland Ratsiraka
Posted on 29/01/2009 by gazetyavylavitra
Alohan’ny hanohizana ny zavatra rehetra dia indro omena aloha ny famintinana ny tranga naneranan ny Nosy:
maherin’ny 100 no maty, ka 17 tany Mahajanga, 31 Antananarivo, (93 naratra Tana), ny ambiny miparitakla manerana ny Nosy)
23 ny Magazay lehibe voaroba sy voadoro
LMafotaka ny fisavana karatra rehefa tonga ny couvre-feu (na mpandeha an-tongotra na anaty fiara)
Nipoitra teo Antananarivo, namangy ny teny amin’ny TVM / RNM Ravalomanana omaly. Avy eo nijery ny fahavoazan’ny Magro Tanjombato sy ny manodidina an’Andoharanofotsy.
Nambarany fa Rolland Ratsiraka sy Dolin Rasolosoa no tompon’antoka araka ny vavao azony tamin’ny Minisitra Frantsay momba ny raharaham-bahiny. Tsy misy intsony hoy izy famoriam-bahoaka azo atao raha tsy misy alalana avy amin’ny fitondrana.
Namaly ny Quay d’Orsay fa lainga no nolazain’i Ravalomanana, fa fifanatonana no nasainy aroso, fa tsy filazana velively momba ny maha-tompon’antoka an’i Rolland Ratsiraka
Rollan Ratsiraka : Sur les ondes de la Radio Antsiva et par telephone: …Tsy manaiky ny filazan’ny fitondrana ny amin’ny maha-tompon’antoka…Hafahafa ihany ….Izahay tsy mamoron-dainga toa an-dRavalomanana…Mba tafaresaka koa tamin’i Bernard Kouschner zahay…Hampandroso an’i Madagasikara ve ny fisamborana an’i Roland Ratsiraka?…Be dia be koa no tokony hitsarana ny filoha…Samia mandeha any amin’ny tribonaly…tsy matahotra an’izany aho…Samia maka izay tiany…fa rehea tsy ao antin’ny antokony dia fahavalo, gadraina, na vonoina….Ny olona te-hamaky ny orinasan-drangahy io foana, na toeran nolalovan-dRolland Ratsiraka na tsia…Ankehitriny azy nyvava ka tsy hitako izay lazaina…Betsaka anie ny kakain’ny vahoaka amin’io fitondrana io e…Mahalala sy miteny izany na ny any ivelany aza….’
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany |	3 Comments »
TAPAKA NY VIVA
Posted on 26/01/2009 by gazetyavylavitra
Navelako nandeha mandra-maraina teo ny Radio, ka ny onjam-peo VIVA no nohenoina.
Sondrian-tory aho nony nisasaka ny alina.
Rehefa nifoha aho fa poritra te-hipipy tamin’ny 03h maraina, dia tsy naheno na inona na inona intsony.
Tapaka tanteraka ny onjam-peo VIVA.
Tsy haiko izay fandehan’ny tantara tao iny alina iny. Nisy ve ny fifandonana? Voasambotra ve i Andry? Nisy ve ny maty sy ny naratra?
Miandry ny andro hiposaka daholo vao mivaly izay rehetra mety ho fanontaniana manitikitika ny be sy ny maro. Ny Radio Antsiva indray izao no nalefako eo io mandra-pifoha maraina, mba hany azo antenaina hilaza vaovao haingana, toy ny Don Bosco sy ireo vitsivitsy namany.
6h35 (26/01/2009) Tsy mandeha koa ny RNM hatramin’izao fotoana izao. Tsy fantatra koa hoe nahoana.
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany |	5 Comments »
Taorian’ny fahatongavan’ingahy Ravalomanana
Nisy fivoriana maika androany hariva, ary dia tapaka tao fa ‘na amin’ny fomba ahoana, na amin’ny fomba ahoana’ (coûte que coûte) dia tsy maintsy atao anio halina ny fakàna ny ’emetteur’ Radio VIVA eny Ambohimitsimbina, sy ny fitadiavana ary fisamborana ny Ben’ny tanàna Andry Rajoelina, miaraka amin’ireo olona tafiditra ao anatin’ilay lisitra misy ny anarany.
Raha nandalo teny Talatamaty ny cortege nitondra azy dia ny olona nanamorona ny arabe kosa nohorakoraka hoe ‘TGC, TGV, TGV’, ary teny amin’ny CENAM 67ha kosa indray dia nanao sit-in teo amin’ny arabe ny mpomba an’i Andry Rajoelina mba haneho hevitra amin’ingahy Ravalomanana fa tsy mankasitraka ny fomba fitondrany izy ire.
Maromaro ihany ireo olona tonga teny Ankazomanga (ireo nizarana vola Ar5000 sy notaterina tamin’ny fiara) mba hanotrona sy hitsena an-dramose.
18h 56 Vao voaray teo ity: Raikitra ny tora-bato entre ny mpomba ny TGV sy ny mpomba ny mpitondra. Raha ny vaovao azo dia ny mpomba ny filoha no tonga mba handrava ilay sit-in, ary niteraka ilay korontana, sy nandrava koa ireo fefy tsara teny amin’ny sisin’ny arabe, noho ny tsy fahazakany ny hiaky ny olona niatsoantso hoe ‘TGV, TGV’. Niantso ny mpitandro filaminana hamonjy eny sy handamina izany ny Radio VIVA, ka asa raha hankeny ireo na tsia
18:59 Misy delegasiona nianinga izao hariva izao avy any Mahajanga mba hamonjy sy hanatevin-daharana ny hetsika etsy amin’ny 13 mai rahampitso
Araka ny onjam-peo ihany dia ireto no isan’ny olona hosamborina: Andry Rajoelina, Gilbert Raharizatovo, Nirhy Lanto, hoy ny Radio VIVA
19h30: Toa efa tsy matoky intsony ny foloalindahy sy ny tafika aty ivelany ny filoha, ka dia ny Sécurité Présidentielle no re fa halefa hanatanteraka ny baiko fakana an-kekriny ny ’emetteur’ sy ny fikarohana an’i Andry Rajoelina anio halina. Ary tsy maintsy mahita vokatra na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana.
20h10: tapaka tanteraka ny làlana eny amin’ny NY HAVANA 67ha noho ny fisian’ny hetsika tampoka nataon’ireo mpomba ny TGV. Voatery nivily làlana nankany amin’ny digue ny cortege prezidansiely avy eny ivato raha saika handalo an’iny faritra iny. (s: Lalatiana Rakotondrazafy)
Nolazain’io loharano io ihany koa fa misy andian’olona mpomba an-dRavalomanana niainga teny Ambohimanarina mba hankeny amin’ny foeiben’ny Radio VIVA, ary efa tonga eny Ankazomanga eny amin’ny fotoana anoratana ny vaovao.
Tsy maintsy hisy ny zavatra hitranga amin’ity alina ity fa dia araho foana ny vaovao avy aty Dago, ho anareo any lavitra any, na izany alefan’ireo izay afaka mampita mandritry ny alina, na izany ho rahampitso
20h38 : Nivadika ho lanonana ny hiakiaka fanohanana ‘TGV, TGV’ eny 67ha. (s: R.V). Namonkona totohondry kosa ny Praiminisitra tamin’ny sarin’ny MBS raha nilaza fa tsy maintsy hisambotra ny Ben’ny tanàna izy. Fiara maro be no lasa nanatitra an’ingahy Ravalomanana any amin’izay toerana hatoriany (tsy fantatra na Faravohitra, na aiza (s: Fidel Razanapiera)
21h15 Vahoaka be no mihorakoraka aty ambany tetezan’i Behoririka aty izao
22h18 Misy 4 x 4, vitre fumé, maka an-keriny ireo mpomba an’i TGV sendra tafasaraka amin’ny maro. Andian-jatovo manao mamomamo no mively kobay ny fiara izay sendra azy eny an-dalana ary milaza fa hoe avy amin’ny TGV, mba hoentina mandoto ny hetsiky ny ankilany